Robotic software yeLinux (marobhoti uye kugona pasina miganhu) | Linux Vakapindwa muropa
ari marobhoti uye njere dzekugadzira vari kuwedzera varipo munyika yedu. Vazhinji vashandisi vava kufarira munda uyu, kungave kwehunyanzvi kana kungoita sevanozvivaraidza. Ivo vese vanofanirwa kuziva kuti kune zvinonakidza Linux distro software mapakeji ekushanda nawo.
Muchikamu chino iwe uchaona rondedzero ine mamwe e mapurogiramu anozivikanwa kwazvo zvine chekuita nemarobhoti uye izvo zviripo zveiyi sisitimu yekushandisa, mazhinji acho chokwadi iwe waisatomboziva nezvawo ...
Mamwe emapakeji anozivikanwa kwazvo esoftware yemarobhoti Ndizvo:
Mutambi Project: iri multiplatform software iyo inoshanda seinowirirana uye robhoti server. Iyo hardware kubvisa dura iyo iwe yaunogona kutevedzera zviito zvakawanda uye kudzora marobhoti zvishandiso. Ehezve, yakavhurwa sosi, yemahara (GNU GPL rezinesi), yemahara uye inowanikwa yeLinux.
NASA Vision Workbench: mufananidzo wekugadzirisa mufananidzo mune mamiriro ebindu remuchina wekuona. Modular, inowoneka uye yakavhurwa sosi chirongwa. Iyo yemahara uye yanga ichishandiswa mune mamwe mapurojekiti eNorth American space agency.
Gazebo: zviri nyore kwazvo kushandisa robhoti simulator. Chirongwa ichi chinobvumidza kushandiswa kwemifananidzo ye3D uye chaive chikamu cheMutambi Purojekiti kubva muna2004 kusvika 2011. Gare gare, Gazebo yaizobatanidza injini yeODI yefizikisi, rutsigiro rweOpenGL, uye rutsigiro rukuru rwema sensors nekutonga nemaactuator anoshandiswa mumarobhoti. Iyo ndeyechokwadi yakavhurwa sosi uye inowanikwa yeLinux.
DART: inomiririra Dynamic Mifananidzo uye Robotic Toolkit, ndiko kuti, musanganiswa wezvishandiso zvemhando ine simba uye yerobhoti. Iyi software iri zvakare muchinjika-chikuva uye yakavhurwa sosi.
Argus: Iyo zvakare simulator, asi zvichibva pane fizikisi. Iyo yakagadzirirwa zvakanyanya pamwero mukuru we robhoti kuenzanisa. Iyo inokutendera iwe nyore kugadzirisa uye kuwedzera mapulagi ekuwedzera kugona kwayo.
OpenRTM-aist: isoftware yakanangana nekuvandudzwa kwemarobhoti uye zvinoenderana neiyo RT standard.
Urbi: ndicho chirevo cheUniversal Robot Body Interface. Iyo chirongwa cheplatifomu yekuvandudza marobhoti ekunyorera uye masisitimu akaomarara. Parizvino yakabatanidzwa muiyo inozivikanwa ROS chikuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Robotic software yeLinux